ဈေးအမျိုးမျိုး ဖြစ် နေသော samsung galaxy S စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် သိကောင်းစရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ဈေးအမျိုးမျိုး ဖြစ် နေသော samsung galaxy S စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် သိကောင်းစရာ
ဈေးအမျိုးမျိုး ဖြစ် နေသော samsung galaxy S စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် သိကောင်းစရာ
Posted by Mobile House on Aug 3, 2011 in Computer & Cell Phone | 20 comments
samsung galaxy S က ေတော့ အမျိုးအစားအမျာကြီးရှိတယ် မော်ဒယ်ပေါ်မူတယ်ပြီး။ဥပမာ galaxy5ခေါ် galaxy i5500 or i5503 ။galaxy3ခေါ် i5800 ။ galaxy S မှာလဲ I9000 /I9001/I9002/I9003/I9010/I909 နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်။ပုံတွေ နဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။
I 9001 I909 I9000 I9003 I9010 M-190
Can you reply the recent Yangon price of the following phones ???
Ummm, if possible pros & cons in regards to Yangon connection.
i ph4black avg 620000 ks and white 700000 ks
galaxy S II avg 480000 ks
HTC = i don’t know ?
Thanks Black Prince 72
Galaxy mini ကရော…??
Galaxy Ace ကရော..?
galaxy mini ကတော့ ငွေဈေး ပေါ်မှုတည်တယ်။ အရင်ကတော့ ၁၈၀၀၀ဝ ကျပ် လောက် ရှိတယ်။ခုတော့ ၁၇၀၀၀ဝ ကျပ် ။ကျွှန်တော် တို့က ဘန်ကောက် ဘက်ကသွင်းတာပါ။ ကျွှန်တော်တို့ ဝယ်မှ ပါကင် ပေါက် ရသောကြောင့် စိတ်ချရပါ သည်။၁၂၀၀၀ဝ လောက် နဲ့ လဲ second hand ကို အသစ်ဆိုပြီးရောင်းနေ သောကြောင့် သတိထား ဝယ်ယူကြပါ။
galaxy mini ကို lotus စတိုးဆိုင်မှာ ဘတ် ၅၀၀ဝ နဲ့ promotion ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
galaxy Ace က S5830 မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ် ။galaxy Ace နဲ့ galaxy copper နဲ့ က မော်ဒယ် နံပါတ် အတူ တူ ပါ ပဲ။ ၃၂၀၀၀ဝ လောက်ရှိပါတယ်။
Galaxy mini က ယုဇနပလာဇာနားမှာ ၁၅၀၀၀ဝ ရှိတယ် တရုတ်စာတွေနဲ့
စံပြရုပ်ရှင်ရုံနားက ဆိုင်မှာတော့ ၁၇၀၀၀ဝ ပါ
ဘယ်လို ဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ iDevice ကိုမရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။adobe နဲ ့ပြဿနာကြောင့် webpage တွေပျောက်နေတယ်လေ။android ကိုတော့ရေရေလည်လည်ခိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် မဝယ်နိုင်သေးပါရှင် ဟင့် ဟင့်
ဈေးပေါ ပါတယ်။galaxy5ဆို ၁၈၀၀၀ဝ acer ဆို ၁၅၀၀၀ဝ ပဲရှိတာ။android ပဲ။
ဟန်းဖုန်းတွေဆို တွေ့သမျှသဘောကျပါတယ်…ဖြစ်နိုင်ရင် ဖုန်းအမျိုးအစားပံလေးနဲ့ဈေးနုံးလေးတွေကို junfrid@gmail.com ကို ပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် blackprince72 ဆက်သွယ်လို့ရမယ်လိပ်စာလေးပါသိချင်ပါတယ်…
မဟုတ်လောက်ပါဘူး။အားလုံးတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး student ရယ်။မှောင်ခိုသွင်းတယ် ဆိုရင်လဲ နာမည်မရှိတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေဘဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ကျောင်းသားလေးရေ
sony ericsson X 10 ဈေးနှုန်းလေး သိချင်လို့ပါ ……..
samsung galaxy တွေလဲမှောင်ခိုနဲ.ပဲသွင်းလာတယ်။
မှောင် ခို နဲ့ မသွင်းရင် ဖုန်းဈေး တွေ တအား တက်လာမှာ ။အခွန် က ၂ မျိုး လောက် ဆောင်ရတယ် ။၁ မျိုး က 50% နောက်တမျိုး က 25% ဆောင်ရတယ် ။
ကျွန်တော့် ဖုံးက Galaxy mini ပါ အဲဒီဖုန်းမှာ Inclination(ရေချိန်)၊ Compass ၊ Bar coad reader တွေ သုံးလို့ ရမလား၊ ဘယ်လိုရှာရမလဲ
တချို့ ဖုန်းအမျိုးအစား တွေမှာ သုံးနေတာ တွေ့လို့ပါ၊ ကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်တော့ သုံးလို့ ရ/မရ မသိဘူး ဆော့ဝဲတော့ တွေ့တယ် ဒေါင်းလို့ မရတာ နဲ့ စမ်းကြည့်ခွင့် မရဘူး
galaxy mini မှာ bar coad reader မရှိ ပါ ဘူး ။ java အတွက်ပဲရှိပါ တယ် ။android မှာ java run လို့ ရ အောင် စမ်းနေပါတယ် ။ရ ရင်တော့ သုံး လို့ ရမယ် ။Inclination က မတွေ့ ဖူးဘူး ။ compass တော့ ရှိတယ်။ Email ပြောပို့ပေးမယ်။